February | 2009 | Mg Ogga's Notes
February 23, 2009 in ကဗျာ.
ဒီဟာသလေးကတော. six faces ဆိုတဲ.ဘလော.တစ်ခုမှာတွေ.လို. ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်းပါစေ။ Today’s Equation! Human = eat + sleep + work + enjoy Donkey = eat + sleep Therefore, Human = Donkey + work + enjoy If, Human – enjoy = Donkey + work In other words, Human that don’t know enjoy = Donkey that work Men = eat + sleep +…
February 18, 2009 in ဟာသသရော်စာ.
ကောင်းသော အလုပ်ကိုလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးကို ရ၍ကောင်းသော အလုပ်ကို လုပ်လျှင် မကောင်းကျိုးကိုရ၏။ ဓမ္မ၏နိယာမအတိုင်း ဖြစ်၏။ဓမ္မနိယာမအတိုင်း ဖြစ်အောင် ဓမ္မက ဆောင်ရွက်သည်။သိုရာတွင် ဓမ္မနိယာမကို ပြောင်းပြန် လုပ်သူများသည် မကောင်းသော အလုပ်ဖြင့် မကောင်းကျိုးကို ရရှိတတ်ကြသည်၏။ကောင်းသော အလုပ်ဖြင့် မကောင်းကျိုးကို ရရှိတတ်ကြ၏။ ဤဓမ္မနိယာမ ကိုပြောင်းပြန် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒုစရိုက်သမားများက ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး သုစရိုက်သမားများ က ဆင်းရဲကြ သည်ကို မျက်စီအောက်ပင် တွေမြင် ကြရလေရာ ဓမ္မနိယာမ ဟူသည် မှန်ကန်မှမှန် ကုန်လေရဲ. လား ဟူ၍် မေးခွန်းထုတ်တတ်လာကြ၏။ကုသိုလ် နှင်အကုသိုလ် အပေါ် သံသယ ရှိတတ်ကြ၏။
February 10, 2009 in ဘာသာရေးရာ, ဆောင်းပါး.
စံပယ်ဖြူ နိုဝင်ဘာလထွက်ပြီး ဆက်မထွက်တော့ပဲ နေနေတယ် ကျနော် ကတော့ စံပယ်ဖြူပျက်ပြီလား ထုတ်ဝေခွင့်ပဲ မပြုတောတာလား စိတ်ပူစိုးရိမ်နေတာ အခုမှပဲ အလုံးကြီးကျတော့တယ် စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁)ဇန်န၀ါရီ၊၂၀၀၉ထွက်လာပါပြီ။မျက်နှာဖုံးမှာ တခြားအဆို အမိန့်တွေ နဲ့မဟုတ်ဘူး စံပယ်ဖြူရဲ့ပင်ကို ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလအရည်အသွေးမြင့်မာမှုမှသည် လူမှုဘ၀ကောင်းမျာဆီသို.ဆို.တဲ့ စကားပဲပါတယ်။ စာအုပ်က အရင်ကထက်ထူတယ် ဒီလ အတွက် special-themes ကတော့ သွေးနှင့်ချွေးနဲ့ရင်းခဲ့ရသည့် အာရှ၏ သမိုင်းသင်ခန်းစာများနှင့် အမျိုသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အကြောင်းဗျ ဆရာ စိုးဌေး ဘာသာပြန်တယ်လေ။နောက် Special pagesfor youth မှာလည်း ဖျော်ဖြေပညာပေးခြင်း၏သက်ရောက်မှု၊ဆွန်ယက်ဆင်၏ပညာရေးငယ်ဘ၀၊သချာင်္ဖြင့်ကမ္ဘ္ဘာဂြိုလ်ကိုဆင်ခြင်ခြင်း၊ အတ]္တနယ်စပ်မျဉ်း၊အပြုသဘောဆောင်သောစည်းကမ်း၊ယနေ့ အင်ဒိုနီးရှား = ၁၆ရာစု ဥရောပ၊ကလေးနဲ့တီဗီ စတဲ့ စတဲ့ ဆောင်းပါတွေ အများကြီးပါတယ်။ စံပယ်ဖြူရနံ ထာဝရကြိုင်လှိုင်နိုင်ပါစေ……..
February 4, 2009 in သတင်း.